Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya: Ezona zilungileyo nezimbi kakhulu
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseColombia zokuPhula • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseNyakatho Korea • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
UPhando lweenqwelomoya-Olona lungcono kwaye lubi kakhulu
Uphononongo oluhlalutya amava abakhweli aqhutywe nguBounce kwizinto ezifana nenkonzo, ukutya, intuthuzelo, kunye nokuzonwabisa, kunye nenani lezikhalazo kunye nesibonelelo somthwalo ophezulu, lubonisa eyona nto - kunye neyona imbi - iinqwelomoya e-USA nakwihlabathi jikelele.
I-Delta Airlines ibizwa ngokuba yeyona nqwelo moya yasekhaya yase-US, ngelixa i-Ana All Nippon ibizwa ngokuba yeyona nqwelomoya ibalaseleyo kwihlabathi, kuphando olutsha.
Iinqwelomoya ezi-5 ezilungileyo zasekhaya e-USA
Uhlu beenqwelo Ukufika ngexesha (Julayi 2021) Izikhalazo ngoJanuwari-Juni 2021 Inkonzo yabasebenzi (/ 5) Ukutya (/5) Ukuthuthuzela kwesitulo (/5) Ukuzonwabisa okubhabhayo (/5) Ubuninzi beSibonelelo soMthwalo (kg) Inqaku leSalathiso seenqwelomoya /10
1 I-Delta AirLines 86.7% 494 3 3 3 3 23.0 8.9
2 Airlines eHawaii 87.7% 115 3 3 3 2 22.5 8.5
3 Iinqwelomoya zeHorizon 83.5% 17 4 3 3 1 22.5 8.4
Ukuthatha indawo ephezulu yiDelta, efumana amanqaku aphezulu njengoko inepesenti yesibini ephezulu yokufika ngexesha (86.7%) kunye nenani eliphantsi lezikhalazo, 494 ukusuka ngoJanuwari ukuya kuJuni ka-2021.
Iza kwindawo yesibini yiHawaiian Airlines. Isekelwe eHonolulu, iyeyeshumi ngobukhulu inkampani yezorhwebo e-US. Ngaphandle kokuza okwesibini xa iyonke, yeyona nqwelomoya ifika ngexesha ene-87.7% yeenqwelomoya ezihamba ngexesha. Nangona kunjalo, ithotywe kukunqongophala kokuzonwabisa kwe-inflight, ifumene amanqaku amabini kuphela amahlanu.
Iinqwelomoya ezi-5 ezibalaseleyo kwihlabathi liphela
Uhlu beenqwelo Izikhalazo ngoJanuwari-Juni 2021 Inkonzo yabasebenzi (/ 5) Ukutya (/5) Ukuthuthuzela kwesitulo (/5) Ukuzonwabisa okubhabhayo (/5) Ubuninzi beSibonelelo soMthwalo (kg) Inqaku leSalathiso seenqwelomoya /10
1 UAna All Nippon Airways 34 5 4 4 4 23 9.6
4 Inkampani yaseJapan Air Lines 45 4 4 4 4 23 9.2
Isekwe eTokyo, iAna All Nippon Airways yeyona nqwelomoya inkulu eJapan ngamanani engeniso kunye nabakhweli. Ikwelona nqanaba liphezulu kwinkonzo yabasebenzi abakumgangatho ophezulu, ekuphela kwenqwelomoya kuluhlu lwethu ukufumana amanqaku apheleleyo kwisalathiso sethu senqwelomoya kulo mba. Ikwanalo nenani eliphantsi lezikhalazo kuma-34.
I-Singapore Airlines ikwindawo yesibini ngenxa yomthwalo wayo ophezulu weekhilogram ezingama-30, inani eliphantsi lezikhalazo (23), kunye nobutofotofo bezitulo eziphakamileyo, iphumelele iimbasa zokuhlala kwayo kwinqwelomoya. I-Singapore Airlines ifumene amanqaku amane kwantlanu kudidi ngalunye kwisalathiso sethu, ngoko akumangalisi ukuba lo mphathi uphume kwindawo yesibini kuluhlu lwethu njengoyena mthwali welizwe jikelele.
Iinqwelomoya ezi-5 ezimbi kakhulu kwihlabathi liphela
3 Iinqwelomoya zeVolaris 379 2 2 2 1 10 4.0
Inqwelomoya yexabiso eliphantsi iViva Air Colombia ibizwa ngokuba yeyona nqwelomoya imbi ehlabathini. Lo mphathiswa ufumana inqaku elinye kwabahlanu kwisalathiso sethu sokutya, ukunethezeka kwezihlalo, kunye nokuzonwabisa kwe-inflight ngenxa yokuba zimbalwa izinto eziluncedo ezinikezelwa kubathengi ngaphandle kwentlawulo. Nangona iye yafumana elona nani liphantsi lezikhalazo ngokubanzi.
Ngokusekwe kwisikhululo seenqwelomoya saseMonterrey eMexico, iVivaAerobus Airline ithwala abakhweli ngaphakathi kwaye iqhuba iinqwelomoya zamazwe ngamazwe eziya kwizixeko zase-US. Ifumana inqaku elinye kwamahlanu kwisalathiso sethu kuzo zombini ezolonwabo kunye nokutya kunye nesibini kwabahlanu kwinkonzo yabasebenzi.
Ingxelo epheleleyo inokubonwa apha.